မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ရောင်းရန် ခြံ ၊ မြေကွက်များ | ShweProperty.com
ရောင်းရန် - ညောင်ဦးနှင့်5မိုင်ခန့်အကွာ ညောင်ဦးမြစ်ကမ်းအနီး…
ရောင်းရန် - တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် မေခလာလမ်းပေါ်တွင်(20*60)ပေကျယ်သော…
ရောင်းရန် - ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် မြေကွက်အမှတ် ၈/၉ ပုဏ္ဏာမီလမ်းတွင်…
ရောင်းရန် - ကုန်းဘောင်အိမ်ရာတွင် (83x80)အကျယ်ရှိ မြေကွက်ရောင်းမည်။…
ရောင်းရန် - တိုက်ကြီးမြို့နယ် ပြည်တော်သာ ( ၁ ) လမ်း ရှမ်းစုရပ်ကွက်တွင်…
တိုက်ကြီး ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ၁၀ တိုးချဲ့ မြေကွက်အမှတ် (၁၅၀)…
ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း မြေသီးသန့်အမြန်ရောင်းမည်။(09…
ရောင်းရန် - ရောင်းရန် - ခြံ ၊ မြေကွက် - ဒဂုံမြို့ သစ် အရှေ့ ပိုင်းမြို့နယ်…
Asking Price : 46,776 သိန်း
ရောင်းရန် - ပုသိမ်-ချောင်းသာလမ်းမအနီးတွင် ခြံရောင်းရန်ရှိသည်။
ပုသိမ်-ချောင်းသာလမ်းမကြီးအနီး၊ဗမာ မရမ်းချောင်းရပ်ကွက်၊အရှေ့ ရွာ စားသောက်ဆိုင် အနောက်ဘက် ၂ခြံကျော် တွင် တည်ရှိပါသည်။…...
ပုသိမ်-ချောင်းသာလမ်းမကြီးအနီး၊ဗမာ မရမ်းချောင်းရပ်ကွက်၊အရှေ့ ရွာ စားသောက်ဆိုင် အနောက်ဘက် ၂ခြံကျော် တွင် တည်ရှိပါသည်။…
Listed 22 March 2019
Advertiser : Phone Myint
Property ID: S-1194513
Office no : 09420077203,09964277203
ရောင်းရန် - စိမျးလဲ့မွိုငျခွံ
ကျောက်ဆည် ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
Asking Price : 5,120 သိန်း
ရောင်းရန် - Land Sale in Bago (ID-338)
6.85 Acres land and 5.85 Acres land for sale in Bago. Asking Price - 1 Acre 1500 Lakhs (Nego) Land Sale in Bago (ID-338) We can do negotiate on that Above mentioned price of the property that is just the asking price of the owners. ပဲခူးမြို့နယ်တွင် ၆.၈၅ ဧက…...
6.85 Acres land and 5.85 Acres land for sale in Bago. Asking Price - 1 Acre 1500 Lakhs (Nego) Land Sale in Bago (ID-338) We can do negotiate on that Above mentioned price of the property that is just the asking price of the owners. ပဲခူးမြို့နယ်တွင် ၆.၈၅ ဧက…
Listed 20 March 2019
Property ID: S-1194336
ရောင်းရန် - Land Sale in Bago (ID-336)
Land for sale in Bago. Land area - 10.2 Acres Asking price is 1800 Lakhs per acre. Land Sale in Bago (ID-336) We can do negotiate on that Above mentioned price of the property that is just the asking price of the owners. ပဲခူးရှိ ရောင်းရန် မြေ ဖြစ်ပါသည်။…...
Land for sale in Bago. Land area - 10.2 Acres Asking price is 1800 Lakhs per acre. Land Sale in Bago (ID-336) We can do negotiate on that Above mentioned price of the property that is just the asking price of the owners. ပဲခူးရှိ ရောင်းရန် မြေ ဖြစ်ပါသည်။…
Property ID: S-1194334
ရောင်းရန် - မြောက်ဒဂုံ ၃၃ ရပ်ကွက် နေရာအကောင်းဆုးံအရောင်း
***မြောက်ဒဂုံရဲ့ နံပတ်၁ နေရာများထဲမှာပါတယ်။ *** မြောက်ဒဂုံ ၃၃ ရပ်ကွက်တွင်ရောင်းမည်။ ၁၈၀၀ သိန်း ( ညှိပေးပါမယ်) ဘေလီတံတားအဆင်း…...
***မြောက်ဒဂုံရဲ့ နံပတ်၁ နေရာများထဲမှာပါတယ်။ *** မြောက်ဒဂုံ ၃၃ ရပ်ကွက်တွင်ရောင်းမည်။ ၁၈၀၀ သိန်း ( ညှိပေးပါမယ်) ဘေလီတံတားအဆင်း…
Soe Kyant Naing Win
Advertiser : Soe Kyant Naing Win
Property ID: S-1191407
Office no : 09404040269
ရောင်းရန် - တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ၀ရုဏလမ်းတွင် (40*60)ပေကျယ်သော မြေကွက်အလွတ်ရောင်းရန်ရှိသည်။
ရောင်းရန် - တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် မင်္ဂလာလမ်းကျောကပ် သီရိနန္နာလမ်းတွင်…
ရောင်းရန် - အင်းစိန်၊ ပေါက်တောဝအနီး
ရောင်းရန် - မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရွှေနှင်းဆီလမ်းသွယ်တွင်မြေကွက်ရောင်းရန်
မြန်မာပြည်ရှိ ရောင်းရန်ခြံ၊ မြေကွက်ရောင်းရန် Real Estateရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေ များ
မြန်မာပြည်ရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွက်ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွက်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွက်ကချင်ပြည်နယ် ရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွက်
ကရင်ပြည်နယ် ရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွက်ကယားပြည်နယ် ရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွက်မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွက်မွန်ပြည်နယ် ရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွက်
ရခိုင်ပြည်နယ် ရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွက်ရှမ်းပြည်နယ် ရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွက်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွက်
ချင်းပြည်နယ် ရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွက်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွက်နေပြည်တော် ရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွက်